इण्डाेनेसियामा काेभिडबाट मृत्यु भएकाहरूका अन्तिम संस्कारका लागि छुट्याइएकाे स्थान ।
काठमाडौं, माघ ३ गते । विश्वभरि कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या २० लाख नाघेको छ । गत्वर्ष डिसेम्बर महिनामा चीनको वुहान शहरबाट सुरु भएको महामारीले एक वर्ष एक महिनाको अवधिमा करिब २० लाख सङ्क्रमितको मृत्यु भएको हो ।
विश्वका अझै कतिपय देशमा परीक्षण दर मापन थोरै छ । जसले गर्दा अतिरिक्त मृतकको संख्या लाखौंमा हुनसक्ने विज्ञको दाबी छ । सिटलस्थित यूनिभर्सिटी अफ वाशिंगटनको ‘इन्स्टिच्युट फर हेल्थ मेट्रिक्स एण्ड इभालुएशन’का निर्देशक डा. क्रिष्टोफर मुर्रेका अनुसार अधिक मृत्युको विश्लेषणले तथ्याङ्कमा समेटिएका मृतकको पाँच भागको एक भाग दर्ता नभएको सुझाउँछ । “हामीले कुल मृतक संख्याको २० प्रतिशत अझै बढी हुनसक्छ ।”–उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो ।
“इक्वेडर, पेरु र रुस जस्ता राष्ट्रमा तथ्याङ्कमा समेटिएको भन्दा करिब ३००–५०० प्रतिशत अत्याधिक मृत्यु भएको छ । तर हामी कहाँ स्पष्ट तथ्याङ्क रहेको स्थानमा यथार्थ मृतक औसतमा २० प्रतिशतले बढ्नेछ ।”– डा. मुर्रेले बताउनुभयो ।
अमेरिकामा सबैभन्दा बढी मृतक संख्या छ । ब्राजिल, भारत र मेक्सिको त्यसपछि सबैभन्दा बढी मृत्यु हुने राष्ट्रहरु हुन् । विश्वको प्रत्येक कुनामा भाइरसको प्रकोप पुगेको छ । तर विश्वबाट अलग्गिएका केही टापू तथा साना राष्ट्रमा सङ्क्रमणबाट हुने मृत्यु गणना गरिएको छैन ।
आईपीएलमा नेपालका आठ जना क्रिकेटर सूचीकृत
कतार विरुद्धको टी ट्वान्टीका लागि नेपाली टोलिमा ठूलो परिवर्तन
एपीएफ र आर्मी भिड्दै, सन्तुलित प्रदर्शनको अपेक्षा